Ubuntu 12.10 izobizwa ngeQuantzal Quetzal | Kusuka kuLinux
Isithombe sithathwe ku-http: //adridesigner.blogspot.com
Ubuntu 12.10 izoba nekhodi noma igama lentuthuko Ubuningi beQuetzal. Lokhu kumenyezelwe yi CEO (emthunzini) de ICanonical, uMark Shuttleworth kubhulogi yakhe. Ngokusho Wikipedia:
El UQuetzal Kuyinyoni yomndeni wakwaTrogonidae, otholakala ezifundeni ezishisayo zaseMelika. Igama "i-quetzal" ekuqaleni lalisetshenziselwa i-Quetzal eQhakazile, i-Pharomachrus mocinno, i-quetzal edumile enomsila omude wase-Central America, okuyinyoni engokomfanekiso yeRiphabhulikhi yaseGuatemala. Ama-Aztec namaMeya akhonza i-quetzal njengonkulunkulu womoya.
Ngiyethemba ukuthi njengenyoni, le nguqulo ye Ubuntu Ngokwezwi nezwi "fly" .. yize ngikungabaza 😛
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 12.10 izobizwa ngeQuantzal Quetzal
Ngicabanga ukuthi lokhu kuchaza Ubuntu KAKHULU ... imibala eminingi nokunye okusele hhayi i-LOL !!
Futhi akuwena owaqala! I-LOL.
ukususa i-orange ngombala oluhlaza hahahaha xD
Noma kunjalo, ngisalinde ngesineke i-12.04 🙂
Ngivela eGuatemala kanti iQuetzal iyinyoni yethu kazwelonke kanye negama lemali yethu.
Umphakathi wabasebenzisi beLinux eGuatemala ujatshuliswa yigama, njengegama lenguqulo elandelayo yeLinux Mint ezobizwa ngeMaya.
HAHAHAHA yebo ngicabanga ukuthi hahahahaha, kumele ngabe bayazithela futhi bajabule kakhulu
uyadlala !! = /
I-Qualzal yeQuantzal?, Ubuntu? ... Nginokuphambuka ngiye ku-distro green ethile eluhlaza
Ngiyaqonda ukuthi i-13.04 izoba negama lenyoni yethu kazwelonke uKristinus Kirchner
Akunakwenziwa ngoba ku-alfabhethi, ngakho-ke u-13.04/XNUMX uzoqala ngo-R, futhi kuzoba yisipho kubo bonke ababusi bethu abadumile baseMexico: uRatus Rastrerus.
Kepha khumbula ukuthi ngamagama esiNgisini. Kungaba into efana neRobber Rat.
Bazoguqula i-gtk ne-icon theme !!! yebo !! Ukuthi bashiya onsundu no-orange vele! 😛 (into ephephe kunazo zonke ukuthi babeka isihloko esesabisayo nakakhulu)
ubunye ku-12.04 ngokwezwi nezwi "buyandiza" okungukuthi buhamba ngokushesha okukhulu. ..
lokho kusho ukuthi kule nguqulo elandelayo izokhuphuka emoyeni ...
Ngiyethemba ukuthi bangenza uhlelo lube lula kakhulu nokuthi luziphatha kahle ekukhishweni okulandelayo, sibe no-2011 onamandla kakhulu ngokushintsha kwesixhumi esibonakalayo kuma-distros amaningi asebenzisa i-gnome ..
Konke kuyazinza futhi kubuyela kokujwayelekile 🙂
IQuetzal yisilwane esihle kakhulu, ngeshwa sisengcupheni yokuqothulwa. Ake sibheke ukuthi Ubuntu buqala ukuzinza yini esikhundleni se- "innovate" ngezinhlelo zayo zokusebenza.
"Umphathi omkhulu (emthunzini)".
Kwesinye isikhathi ngiyazibuza ukuthi iCanonical ikwenzani kuwe ekwenza uphonsa imibono eminingi ebhuqayo nengasho lutho. (Ukuthi iqiniso elilula lokuzonda inkampani libukeka liyisilima kimi).
Kimi I-Canonical Akungenzanga lutho kimi, kunalokho, kunginike okwanele. Futhi angiqondi ukuthi la mazwana angiyena lowo ohlasela le nkampani kakhulu kule bhulogi. Kodwa-ke, ngizokutshela ukuthi ukuphawula kwami ​​okubhuqayo kunengqondo, ngoba kusukela khona kanye UMark Shuttleworth memezela lokho UJane silver bekungaba okusha Isikhulu esiphezulu seCanonical, alukho ushintsho lwanoma yiluphi uhlobo, uyaqhubeka nokuba nguyena ongena maphakathi nendawo, lowo omemezela izinto "ezintsha" ze Ubuntu nokuthi ngubani ngempela othatha ikhekhe.
Ngeke ingene ekhanda lakhe lapho ehlangana nohlangothi lwakhe ...
Uyi-troll nje engicabanga ukuthi…
Nami ngivela eGuatemala kepha ukusetshenziswa koBuntu akungikhangi nakancane, manje iLInuxmint kungenye indaba. 😉
Yinhle kanjani iQuetzal * - * Ngiyazibuza ukuthi bazoyenza yini ingqikithi ye-GTK ngohlelo lwe-chameleon njengesiqalisi ... Kungathakazelisa, ngakho-ke ngangihlala ngihlanganisa ingemuva, isiqalisi namawindi 😀
Yebo, igama lihle kakhulu, angiveli eGuatemala kepha ngiseCentral American ... bengifuna ukuhlala no-Ubuntu 12.04 futhi ngivuselele kuze kukhishwe i-LTS elandelayo kepha uma ikhwalithi nokubukeka kwe-12.10 kubonakala kimi, kuzoba kufanele uzame futhi uzame
Ngiyalithanda igama, ngabe bakubeke lokho ngo-12.04 😛
Kukhona womabili ama-quetzal namaMaya kwezinye izindawo, hhayi eGuatemala kuphela (angisho lokhu kunoma ngubani ovela lapha, kepha eGenbeta nakwamanye amakhasi ngangivele ngicikekile ngalokho "akuyona inyoni yehlathi, ivela eGuatemalan amahlathi "Angitholanga ukuthi yikuphi okunye okuyikhiphile 😀
Yeka i-quetzal enhle; u; yinyoni engiyithandayo> w
Hhayi ... ngithuthele ku-LMDE, lokho ngeke kungiyekise ukufuna ukuqala ukudlala ne-Virtualbox ukuzama i-xD distro
Nami ngizozama le ephumayo manje
IQuetzal akuyona iGuatemala kuphela, yabiwa yibo bonke abantu baseMesoamerican (iMexico neCentral America) kusukela ezikhathini zangaphambi kweColombia, ngaphambi kokufika kweSpanish.
Isiphelile ngoba izimpaphe zayo zanenani lokwenza imikhiqizo ehlukahlukene yendwangu noma yezingubo. Njengamanje iGuatemala ukuphela kwezwe eliyamukela ngokusemthethweni futhi liyivikele, njengoba sekushiwo ngenhla.
Yebo, kuyinto ejwayelekile ukuthi eGuatemala kuyavikelwa, kuyinyoni kazwelonke lapha.
july david kusho
I-quetzal iyinyoni enhle kunazo zonke emhlabeni eyingqayizivele
Phendula uJulio David
Hhayi-ke angikaze ngicabange ukukhathaza noma ngubani kodwa kungokwemvelo futhi kungumuntu ukwenza imibono engahlangani futhi ngibonge izingqungquthela zami nama-Ispans ahlonishwayo «» Phila umncintiswano «» noma ngabe siqhamuka kuphi ..